देश चुनावमा गइसक्यो, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदैनः प्रधानमन्त्री - Nepal Samaj
देश चुनावमा गइसक्यो, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदैनः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । काठमाडौंमा शनिबार कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् कुनै पनि हालतमा पुनःस्थापना नहुने दाबी गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्तालाई झुक्याउन प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको हल्ला फैलाएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पुनःस्थापना हुने कुरा कहाँबाट आयो ? पुनःस्थापना हुने कसले भने ? देश चुनावमा गइसकेको छ, निर्वाचन आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका पछाडि आफूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट आएको अविश्वासको प्रस्ताव लगायतका कुरा रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
उनले आफूलाई जानकारी नदिइ राष्ट्रपतिकहाँ गएर विशेष अधिवेशन माग गर्नु, संसदमा सरकारले लगेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्नु नै प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण भएको बताए । तीन वर्षदेखिका विधेयक संसदीय समितिमा लगेर अड्काएकाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले सभामुखले तीनवटा अधिवेशन अगाडि सरकारले पेश गरेका प्रस्ताव प्रस्तुत नगरिदिएको र तीन वर्ष देखिका विधेयक समितिमा अड्काउने काम गरेको समेत आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘संसदमा सरकारले निर्णयका लागि पेश गरेका प्रस्तावहरु प्रस्तुत हुँदैनन् । सभामुखले तीनवटा अधिवेशन भए, तीनवटा अधिवेशन अगाडि सरकारले राखेका प्रस्ताव निर्णायर्थ प्रस्तुत हुँदैनन । तीन वर्ष अगाडि देखि राखेका प्रस्तुत गरेका विधेयक समितिमा लगेर अल्झाइदिएको छ अल्झाइदिएको छ । समितिबाट अगाडि बढ्दैन । किनभने सरकारलाई असफल देखाउन । त्यस प्रकारको स्थितिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि लोकतान्त्रिक विधिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि अस्वस्थ षड्यन्त्रको चक्रव्युहमा देशलाई फस्न नदिनका लागि यो प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नुपरेको हो ।’
बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुखलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको पनि बताए ।